Windows 8 မှထွက်ပေါ်လာမည့်သတင်းများ (Linux နှင့်ဆင်တူမှုသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ) | Linux မှ
Windows 8 ယူဆောင်လာမည် (Linux နှင့်ဆင်တူမှုသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ )
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, အခြား, အကြံပြုပါသည်
စိတ်ကူးမှချေးယူစဉ်ကမူရင်းမူရင်းကိုအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်ထားသော OS ဖြစ်သည် Appleနှင့်သင်၏လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ထည့်ရန်နောက်ထပ်ဥပမာများရှိပါသည်။ ကောင်းပြီယခုလာမည့်အတူ Windows ကို 8 ဒါကအောင်မြင်မှုရှိလိမ့်မယ်၊ ငါ sarcasm မပါဘဲရိုးရိုးသားသားပြောချင်တာက \_ t Windows ကို 8 ဒါဟာအောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါရူးသွားပြီလား … အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Linux distros တွေမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသော (ကူးယူထားသော) အတွေးအခေါ်များ (လုပ်ဆောင်ချက်များ) ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Linux လောကတွင်အောင်ပွဲခံပြီးပြီဖြစ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါကသင်ဤအရာအားလုံးကိုထည့်လိုက်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သူတို့ usually အသုံးပြုလေ့ရှိသောဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်လူသိရှင်ကြား
1 ၁- ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မိတ္တူကူးထားသည့်သတင်းရှိသည်။
2 ၂- မိတ္တူပွားထားသောဖိုင်များကိုကြိုတင်ကြည့်ပါ -
3 LiveUSB ပေါ်ရှိ Windows3။
4 4- တိမ်တိုက်ပေါင်းစည်းမှု။
5 ၅ ဖိုင်စနစ်အသစ်။
6 ..- အဆုံး
1- ဥပမာ၊ မိတ္တူကူးအကြောင်းသတင်း:
ဒီဟာကအေးတယ်မဟုတ်လား sure ... သေချာတယ်၊ ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်။
မိတ္တူအမြောက်အများတူညီသော ၀ င်းဒိုးအတွင်းသို့ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်ဂရပ်ဖစ်ထည့်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်တိုက်ဆိုင်မှုများသာဖြစ်သည်
၂- မိတ္တူပွားထားသောဖိုင်များကိုကြိုတင်ကြည့်ပါ -
ဒီဗားရှင်းဗားရှင်းမှာ ၄ င်းကိုပွတ်လိုက်တယ်၊ ဖိုင်အတော်များများကိုတပြိုင်နက်တည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ အပေါင်းဖြစ်တယ်။ 🙂
En Windows ကို7တူညီတဲ့အယူအဆရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ KDE အချိန်ကြာမြင့်စွာ:
LiveUSB ပေါ်ရှိ Windows3။
အဖြစ်ကောင်းစွာအတွက်ညွှန်ပြ ၏ site HP:
ယခု Microsoft သည် Live operating system တစ်ခု၏သဘောတရားကိုအခြားအဆင့်တစ်ခုသို့ယူလိုက်သည်။
ယခုအခါ Microsoft သည် Living Operating System ၏အယူအဆကိုအခြားအဆင့်သစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
… အထူးပြောစရာမရှိ… ¬_¬ ...
ယခု Microsoft က သင့်ရဲ့ဒေတာထဲမှာသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် SkyDrive ကို။ သင်အသုံးပြုနိုင်သောစုစုပေါင်း 25GB ဖြင့်သီချင်းနှင့်ရုပ်ပုံများသာမကသင်၏သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့်အခြားအရာများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ပေါ်လာပါ, ၏ဖြစ်တည်မှု / စိတ်ကူး Ubuntu One ပါ ၎င်းသည်ဘဝ၏တိုက်ဆိုင်မှုများအနက်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့နေရာ ၅ GB သာပေးသည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့် ၂၀GB ပိုရလိမ့်မည်။
ယခုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက ... မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ဆိုးရွားပုံမပေါက်ပါ။ သို့သော် ... အဆက်အသွယ်များ၊ စကားဝှက်များနှင့်စသည်တို့ကိုမိုးတိမ်တွင်သိုလှောင်ထားခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်အရူးဟုထင်ရသည်။
ပရိုတိုဂွန်အစားထိုးမည့်ဖိုင်စနစ်အသစ် NTFS ပေါ်လာလိမ့်မယ် Windows ကို 8.
အတိုင်း ITWorldဒီစနစ်ကဆင်တူတယ် ZFS (Z ဖိုင်စနစ်) အဖြစ် Btrfs.
ခင်ဗျားအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီ Kakashi-sensei ထဲကမိုက်ခရိုဆော့ဖ် developer တစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောချင်ပါတယ် (Copy-Ninja အမည်ရှိ Naruto မှ Anime ဇာတ်ကောင်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများကိုသူတို့မည်သို့ဖြေဆိုမည်ကိုကြည့်ပါ ¬_¬
Microsoft သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိသေးပါ၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောအတွေးအခေါ်များ / အတွေ့အကြုံများကိုသာချေးယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်အဆုံးတွင်၎င်းသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။Windows8 သည် operating systems များကိုပြောင်းလဲစေသည့် OS ဖြစ်သည်" ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Windows 8 ယူဆောင်လာမည် (Linux နှင့်ဆင်တူမှုသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ )
156 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Windows 8 သည် OS လောကကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သော်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာသည် ကျွန်ုပ်သည် Windows XP၊ Vista (စုစုပေါင်း)၊ ၇ နှင့် ၈ (Developer Preview) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကို Windows နှင့် Linux အသုံးပြုသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Windows ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာ Windows အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်းယခုနှစ်များသည် Windows ထက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။
ယခုအခါအခြားအပိုင်းတစ်ခုမှာ Microsoft သည် Linux လောကကိုကူးယူရန်ဆုံးဖြတ်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Vista နှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများ၊ KDE, Compiz ၏လှပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အချည်းနှီးသောကူးယူမှုနှင့်အတူတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့ငါဆိုလိုတာကတော့ effect တွေကိုပဲဆိုလိုတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက end user ကအများဆုံးမြင်တာပါ။
ကောင်းမွန်သော post နှင့်အလွန်ကောင်းသောနှိုင်းယှဉ်။
ဒါငါ့အတွက်ဖြစ်ပျက်တာအတိအကျပါ ယုတ္တိဗေဒအခြေခံစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့၊ (များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင်) ငါ့ကိုဒီနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Linux ကသင်ပေးတယ်။ ငါဟာကမ္ဘာကိုတစ်ခုခုအစေခံခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ ငါလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ😀
စစ်တိုက်ခြင်းငှါမ Kage အပေါ်လာကြ။ ကမ္ဘာကြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် Windows အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်ထူးကဲသောအရာသစ်တစ်ခုရှိကြောင်းယုံကြည်ခွင့်ပြုပါ။ အဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်၊ GNU / Linux နှင့် ၄ င်း၏ desktop ပေါ်ရှိအရာများအပါအ ၀ င်တိုးတက်ရန် ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစကား: "နောက်ကျဘယ်တော့မှထက်သာ။ ကောင်း၏။
Windows Vista ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အလင်းရောင်ခြည်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်အလွန်အေးမြသည်ဟုထင်သည်မှာစားသုံးမှုသည် LOL ဟာသဖြစ်သည်!
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၂ စက္ကန့်မပြည့်ခင် OS တစ်ခုစတင်ရန်စီမံခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောစနစ်ဖြစ်သည်။ Linux သည်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အသုံးပြုရန်ဝေးကွာသောလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ linux ဟာလွတ်လပ်တဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ တစ်ခုကတော့စွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
၎င်းတို့သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ၀ င်းဒိုးသည်၎င်းကိုအားနည်းနေသည်။ ဆာဗာများ (အဓိကအချက်များတည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိသောနေရာများ) တွင် Windows သည်မထီမဲ့မြင်ပြုပြုမှုကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်သော Linux ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသည့်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပါ။ ၎င်းသည်အခြားတစ်ခုမဟုတ်ပါက၊ စနစ်များပြောင်းလဲသွားပြီး၎င်းသည်နောက်ကွယ်တွင်နောက်ကျကျန်ရှိနေသည်ကို၎င်းင်း၏နောက်ကွယ်မှ linux သည်၎င်း၏ဆာဗာများ၏လုံခြုံရေးတွင်အကျိုးရလဒ်များရှိကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ မကြာသေးမီက Microsoft ၏လုံခြုံရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဟက်ကာတစ် ဦး က linux သည်လုံခြုံသောစနစ်ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်မကြိုးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
linux ကိုကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် ubuntu software စတိုးမှထွက်ခွာရန်ကြိုးစားသည့်ရိုးရှင်းသောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် terminal ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
တည်ငြိမ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာစီဒီတစ်ခုမလိုဘဲမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည့် Windows7ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows တွင်ရှိပြီးအလွန်အရေးကြီးပြီးဆန်းသစ်သည်။ Linux မှာသင်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသာမန်အသုံးပြုသူတွေအတွက်သုံးရတာအရမ်းမလွယ်ဘူး။
@Itachi Linux ဟာမတည်ငြိမ်ဘူး၊ အမှားအယွင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်ကရလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ တကယ်တော့ "Windows ဟာပိုပြီးတည်ငြိမ်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်တာလဲ" ဆိုတာဘယ်ကိုရလဲငါမသိဘူး။ ဒီလိုမျိုး fanboy မလုပ်ပါနဲ့။ Windows ကသူဖျက်လိုက်တိုင်းသူ့ဟာသူပြုပြင်ချင်တယ်။ ယမန်နေ့က System 32 file သည်ကျွန်ုပ်အိမ်နီးချင်း၏ pc တွင်ဘာမှရှင်းပြချက်မရှိဘဲယခု CD ကို Windows မှ boot မလုပ်လိုပါ။
ဟက်ကာတစ်ယောက်ပြောခဲ့တာလား။ ထို့နောက်အစစ်အမှန်ကိုပြောပါ၊ အကြောင်းပြချက်မှာတိုက်ခိုက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲစွမ်းရည်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Linux ထက် BSD သာလျှင်ပိုမိုလုံခြုံသည်။
nano ငါ linux သည်သူ၌ရှိသောအတွေ့အကြုံမှမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ၄ င်း၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းများအားလုံးသည် linux အတွက်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်ဗိုင်းရပ်စ်များမလိုအပ်သောအရာများကြောင့်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်၊ အခြားကုမ္ပဏီများ၏ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုသင်ကြိုတင်မဲမလိုချင်ပါကအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးအတွက်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်သကဲ့သို့ ၀ င်းဒိုး ၇ သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားသာပြန်လည်ပြုပြင်နေသည်ကိုသင်မသိလျှင်၊ backup သို့မဟုတ် backup လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုခုကသင့်ရဲ့ windows တွေကိုလုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီအတွက်ရေခဲသေတ္တာကိုသုံးနိုင်တယ်။
@Itachi ဘယ်လူသားစနစ်ကမှအမှားအယွင်းများမှကင်းလွတ်သည်။ အချို့လူများကသင့်ကိုယုံကြည်ရန်တစ်ခါတစ်ရံတွင် GNU / Linux တွင်ဘာမှမမှားပါဟုသင်ပြောလျှင်မှားပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်သည်အလွန်ဟန်ဆောင်မှုရှိသည်။ ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှ Windows ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကိုလည်းမသိဘူးလို့မပြောပါနဲ့။
Windows 98 ကနေ Windows7ကို Windows လိုင်စင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်လိုင်စင်နဲ့အမြဲတမ်းနီးပါးအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ပါ။ GNU / Linux ကိုကိုယ်ပိုင်စက်တွေမှာတစ်နှစ်သုံးခဲ့ပေမယ့် Windows ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပြုပြင်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်။ ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မိသားစုကိုကူညီသည်။ Deep Freeze ကကျွန်ုပ်အားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်အိပ်မက်ဆိုးများအားလုံးကိုမှတ်မိရန်မငိုချင်ပါ။ ဖယ်ရှားပစ်ရန်များစွာကုန်ကျသော malware အမြောက်အများကိုပြန်လည်စနစ်ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ UAC သည်ထွက်လာသည့်အခါအသုံးဝင်သောအရာဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး (အခမဲ့ (သို့) ငွေပေးချေခြင်း) သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်နာကြည်းစရာများအပြင်အခြားအရာများနှင့်ဖမ်းမိသောအရာများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဟာ ၀ င်းဒိုးထဲကိုအခမဲ့ tools တွေထည့်ပြီး 90% Freeware နဲ့ OS ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့တခြားငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဖြန့်ဖြူးလိုက်တယ်၊ သင်အဲဒီအကြောင်းပြောနေတာတွေအားလုံးထက်ပိုပြီးနီးပါးအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အံ့သြစရာတွေအားလုံးကိုပယ်ချပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ Windows တွင်ကျိုးနွံလာသည့်အရာနှင့်စနစ်ကိုနှောင့်နှေးစေပြီးနှေးကွေးစေသည်။ နောက်ဆုံးမှတစ်ရက်မှနောက်တစ်နေ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဤသို့ပြောခဲ့သည် - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူ application များကိုအသုံးပြုပါက OS ကိုမပြောင်းပါနှင့်ကျွန်ုပ်မှဤအရပ်မှကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ? အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အခြေအနေကိုရိုးရိုးသားသားအကဲဖြတ်လျှင်၊ သူဘာလုပ်သည်ကိုကြည့်ပြီးသူ၏ hardware သည် (Linux ပြproblemနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်) ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ပါက GNU / Linux သို့ပြောင်းခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ကူးမရှိသောအခြားသူများသည်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ပျော်စရာ၊ လေ့လာရန်အတွက်သူတို့၏စက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၌ပြproblemsနာများပိုနည်းသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တိကျတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ၀ င်းဒိုးအတွက်သာပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တပ်ဆင်သော GNU / Linux distros များတွင်အသုံးပြုရန်မတည်ငြိမ်ပါကသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခြင်း။
အသုံးပြုသူများအတွက်အမည်မသိအသုံးပြုရလွယ်ကူမှုမှာအရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ Gnu / Linux ကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောစနစ်တစ်ခုရှိရန်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုအချိန်ကအသုံးပြုချိန်တွင်ရှိခဲ့ဖူးသောဖြစ်နိုင်ခြေများစွာအတွက်အရေးကြီးသောအရာ၊ အသုံးပြုသူများ၊ Gnu / Linux ကိုယေဘုယျအားဖြင့်စံပုံစံဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူက၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်နှင့်အသုံးပြုပုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော OS သည်အစဉ်အမြဲအနိုင်ရသည်ကိုသိ ဆော့ဗ်ဝဲကိုရှာနေတာ။
Gnu / Linux တွင်အားသာချက်များစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သို့သော်သင်အသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးမှုများသည်လုံးဝအခမဲ့မဟုတ်ပါ။ Debian ကိုအသုံးပြုသောအမည်ဝှက်သူသည်၎င်းသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြန့်ဝေမှုမဟုတ်ကြောင်းသိသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ kernel တွင်စီးပွားဖြစ်ကုဒ်အချို့မပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ OD ပေမယ့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်၌တည်၏။ လတ်တလောတွင်အခမဲ့ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသော operating system အများစုသည်၎င်းတို့သည်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ် software အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဆော့ဝဲလ်ကိုနောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာအလွန်ခဲယဉ်းသောကြောင့် Gnu / Linux တွင်တိုးတက်မှုများစွာရှိနေသေးသည်။ ဖြည့်စွက်ရန်ကွက်လပ်များစွာရှိသည်။ ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းမှ format သို့ပြောင်းခြင်းနှင့် hardware အရှိန်မြှင့်ခြင်းတို့ကိုများစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပြproblemsနာမရှိပါ၊ အကြောင်းမှာ Gnu / Linux အတွက်ယာဉ်မောင်းသူများစွာရှိပြီးကောင်းမွန်သောအရှိန်မြှင့်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်တော့ဒီဟာတွေကိုယ်တိုင်ကတခြား OS ကိုပိုပြီးအကျိုးအမြတ်များစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်အခမဲ့ Gnu / Linux စနစ်များကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသိလိုလျှင်သွားပါ http://www.gnu.org/distros/free-distros.es.html သင်ချစ်ရသော Ubuntu ပင်လျှင်အခမဲ့မဟုတ်ပါ
၀ င်းဒိုးသည်သင့်အားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုရယူလိုသူ (သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်အရသင်အားနို့စို့ကဲ့သို့အသုံးပြုရန်) လိုလားသည့်အဆင်သင့်ဖြစ်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရား၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အမြဲတမ်း“ ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ” ပျက်သွားသည်။
အကယ်၍ ထို disk သည် bounce မပြုလိုပါက၎င်းသည် disk များပုံမှန်အားဖြင့်ပျက်စီးနေသောကြောင့်၎င်းသည်ပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း Windows နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်သာ "ပျက်စီးခြင်း" ဖြစ်သည်။
သို့သော်မြို့ပြဒဏ္legာရီများအရ Windows သည်မှော်ဆန်သော (သို့မဟုတ်မှော်မဟုတ်သော) နေ့တိုင်းချိုးဖောက်သောအရာမဟုတ်ပါ။
အသစ်ပြောင်းခြင်းထက်အရာခပ်သိမ်းကိုပြုပြင်တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေကို format လုပ်တာ၊ ပစ်တာဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုဖွင့်တာနဲ့ဂရပ်ဖစ်စနစ်ပြတ်တောက်တာတွေထက် distros တွေမှာတွေ့ရတာပိုပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်။
အကယ်၍ သင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယခင်ကဖယ်ရှားခဲ့ပါက၊ ထိုစကားလုံးအရ၊ ပြန်သွားသည့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ကိုသင်အသုံးမပြုပါ၊ ဘားပြုတ်သည်ခုန်။ skewered ဖြစ်လျှင်တိုင်၏အမှားကားအဘယ်နည်း။
တစ်နေ့မှာ GNU / Linux ကိုအထူးသဖြင့် Private Software (နှင့် craks) များရှိရင်၊ malware ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာမဖြစ်နိုင်တာနဲ့စူပါစနစ်၏အလွန်လုံခြုံမှုရှိခြင်းနဲ့ငါ့ဆီမလာပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှားယွင်းနေတာအပြင်၊ maqueros ပြောခဲ့သလိုသင်အဲဒီမှာရှိတာကလူတွေများများကြည့်တဲ့နေရာမှာမျက်စိများများမြင်နိုင်တယ်။ (မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်) နှင့်ကွက်လပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားသောအရာအားလုံးထက်လူများကိုအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ရန်ရှာဖွေခြင်း။ ရယ်စရာကောင်းတာက maqueros ရဲ့ပျက်ကွက်မှုကိုလှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေက Linux သုံးစွဲသူတွေပါ။ သူတို့လည်းအတူတူပဲအပြစ်ကျူးလွန်နေကြတယ်။
ထို့အပြင်လူများသည် cracking ကိုရပ်တန့်ပြီး၎င်းတို့ install လုပ်ပြီးသောအရာကို install လုပ်ခြင်းကိုပိုမိုသတိထားမိလာသောအခါ "magically Windows တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ" သည်မှာအဆန်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါ။ စာရွက်ပေါ်တွင် Open Source သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (သို့သော် Stallman မပါ); နာမတော်သည်လွတ်လပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုရည်ညွှန်းသော်လည်း ၄ င်းတို့၏တင်စားချက်သည် ၄ ​​ခုစလုံးပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်အပိုထပ်ဆောင်းညွှန်ပြချက်သို့မဟုတ်ထပ်မံဖော်ပြခြင်းမရှိသော Open Source သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်ပိတ်ထားသောကုဒ်ပါ ၀ င်သည်။ ဒါကသက်သက်အဆင်ပြေဘို့အတင်းအကျပ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြင်တော်မူ၏။ သူတို့ကနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုသေချာပေါက်တီထွင်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့၏ postulates မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Open Source နှင့် Close Source ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Open Source အတွေးအခေါ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အရာမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုရန်အပြင် ဘာမှမ ပွင့်လင်းသောသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်များကိုသတိမပြုမိသူမည်သူမဆိုပြုလုပ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်၎င်းအတွက်အထူး "ခေါင်းစဉ်" မလိုပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်သက်ရှိများသာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်သည် Open Source ဖြစ်ရမည် su ပုံမှန်ပြည်နယ်မှအမည်။
သင်ဟာအရာရာတော်တော်များများမှာမှန်တယ်၊ ငါဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမဟုတ်၊ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲမဟုတ်သေးဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမကောင်းဘူး၊ ကောင်းစေတယ်၊ ​​Gnu / linux၊ Mac (သို့) Windows တွေမှာလည်ပတ်နေတဲ့စနစ်ကိုသိရလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်များ၏အမိန့်ကိုလိုက်နာသည်။ OS သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွပ်မျက်ခံရမည့်အစီအစဉ်များကိုအရင်းအမြစ်များပေးသောခုံသမာဓိလူကြီးသာဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဒီဇိုင်းကိုမဆိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်၊ သို့သော်အရေးကြီးသည့်အရာမှာသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအများစုသည် ၀ င်းဒိုးသို့အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ အခြား OS များသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်သူကိုသာအာရုံစိုက်သောကြောင့် ၀ င်းဒိုးနှင့်အခြားဖြန့်ကျက်မှုများကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီလုပ်ဆောင်ပါကဝေဖန်ရန်အချိန်ဖြုန်းတီးသည်။ လက်ရှိကွန်ပျူတာ၌တည်၏။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်နောက်ဆုံးပေါ် Ultra-Power နို့စက်ကိုသင်ဝယ်ယူသည်အထိနှစ်စက္ကန့်အတွင်း။ သင်သာမန် PC များပေါ်တွင် windows နှင့် linux ကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ တွေ့လိမ့်မည်။ ငါသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ၏အိမ်တွင် archlinux ကို eeePC တွင်ထည့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းစမည်။ cores နှစ်မျိုးလုံးသည် hardware နှစ်ခုလုံးအတွက်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ windows များသည်ပိုမိုကြာမြင့်မည်မှာသေချာသည်။ ဆိုလိုတာကငါကိုးကားစရာမလိုဘဲနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်, ပြတင်းပေါက် 10 စက္ကန့်အတွင်းစတင်ပါ။2ယူရို xD ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ
ငါပြတင်းပေါက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ငါကမယုံ, အနည်းဆုံးကအခြားစနစ်ကနေတိုးတက်မှုချမှတ်ရန်လူသိများသည်ပြတင်းပေါက်များတွင်ငါ Linux နှင့်အမှန်တရားကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ ... သူတို့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့, မွေးစားသို့မဟုတ်ကူးယူရန်မည်သို့မည်ပုံကိုသိရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကနေဆဲရှည်လျားသောသွားကြဖို့လည်းလမ်းများ 8 သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါလိုချင်တဲ့ tools တွေတောင်မှရှိတယ်။ Linux မှာ Windows လိုမျိုးအောင်မြင်ဖို့အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ရယ်စရာကောင်းတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Poker ကာထားတာလားမသိဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့သူတို့ယုံကြည်တာကသူတို့အယူအဆကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပဲ။
ပြီးတော့ပြောကြပါရစေ။ ခရစ်ဟာဖာကိုလံဘတ်စ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်သမိုင်းအသစ်တွင်“ အသစ်” ကမ္ဘာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် Linux သို့မဟုတ် Mac မှအရာများကိုကူးယူမည့်ပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ RAE ပေါ်လာလားဆိုတာကိုကြည့်ပါ။ » GFYS 😉
ဟားဟားဒီ windoleros ... ဒီဆောင်းပါးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့မယ်
ပြီးတော့ငါပြောချင်တာကမိန်းမတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့မတူတဲ့တခြားဥပမာတွေမရှိဘူးလား။ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ ...
ဒီတစ်ခု .. မင်းကအဝတ်အချည်းစည်းကောင်လေးရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်မင်းငါ့ကိုအယ်လ်အေရီနိုဆိုကမင်းကိုအားရ ၀ မ်းသာစေတယ် .. ငါ့ကိုမင်းကိုအသိပေးပါ။ ငါအဲဒီလိုပြောရင်မင်းမှာမင်းမှာနို့မကောင်းတဲ့အတွက်မင်းမှာရည်းစားမရှိဘူး ...... ¬¬
သူမမှာရည်းစားမရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ရန်ညအချိန်တွင် fuck ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါ။
ငါပြီးသားသင်တို့အားအဒေါ်၏ဓါတ်ပုံများကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တင် reggaeton ကြောင်းပြောခဲ့သည်
ပြီးတော့သင်ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းကိုအမျိုးသမီးများရဲ့ပြဇာတ်ကိုပြင်သစ် Dofusers မှတင်ထားတာဟုတ်ရဲ့လား xD
အဲဒီမှာငါကအခြားအမှုအရာတို့တွင်အ mania ယူခဲ့ပါတယ်
reggetónကိုမတီထွင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော့်အဒေါ်တွေအကြောင်းကိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ ထိုအခါစံချိန်တင်ဘို့, ငါကလောင်အမည်ဂီတ၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။
စင်စစ် KZKG ^ Gaara သည် reggaeton ကိုနှစ်သက်သည်။
ဗီဒီယိုကိုဘယ်လောက်ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်အမျိုးသမီးတွေမကြိုက်တာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်သင်ဟာမိုက်မဲပြီးကလေးဆန်သောဆင်ခြေကိုသုံးပြီးမစဉ်းစားတော့ဘူး။ လာစမ်းပါ ဦး၊ မင်းမိန်းမတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမင်းသူတို့ကိုသတ်ပစ်မှာလား၊ လာပါ၊ သူငယ်လေး၊ မင်းမှာမင်းရဲ့စိတ်မကောင်းစရာစကားကမင်းကိုလူသတ်သမားလို့တောင်မထင်ဘူး၊ အပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ရှိတဲ့မင်းသမီးကမင်းမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမမှန်ပါဘူး။ ပြီးတော့မင်းတို့ဖြေဖို့ကမှန်တယ်၊ အားလုံးကလိင်မဟုတ်ပေမယ့်မင်းမှာရှိရင်ဟဟားဟားကိုမထွက်ချင်ဘူး
မင်းတို့ငါ့ကိုဒီမှာတွေ့နေရတယ်၊ မင်းငါ့ကိုမမြင်ရရင်ငါဘယ်လောက်ဒေါသထွက်နိုင်တယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး။
ထိုအကြောင်းပြချက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မိုက်မဲပုံမထင်ပါ။ ငါမိန်းမတွေကိုမကြိုက်ဘူးလို့ငါမပြောဘူး၊ သင်ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းငါသည်လည်းလိင်တူဆက်ဆံသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ခင်ဗျားကစုံလင်တယ်ဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်၊ ငါ pissed ထွက်တဲ့အခါကျွန်တော့်ဇနီးကိုပစ်လိုက်တယ်၊ သူမခေါင်းကိုရိုက်နှက်ပြီးသူမရဲ့တစ်ဝက်ကိုဘဝအတွက်မိုက်မဲစွာထားခဲ့တာလား၊ အဲဒါကောင်းတယ်။
ဒါဆို Courage ကကြက်တွေကိုကြိုက်ရင်လား။ သင်ဘက်မှမည်သည့်ပြိုင်ပွဲမှမသွားနိုင်လျှင်သင်သည်အခြားတစ်ဘက်တွင်အမှိုက်များကိုပစ်ချပြီးပြီ။ (လိင်တူချစ်သူ) ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဤတွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမညည်းညူခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် "မြင့်မြတ်သော" လမ်းစဉ်ပင်ဖြစ်ခဲ့သေးသည် (xD ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်၌ LOL ရည်းစားရှိသည်ဟုယူဆသည် ( အဲ့ဒါနဲ့ငါအနိုင်ရခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့က LOL ပဲလို့ငါထင်တယ်)
ဒါပေမယ့်ဆက်သွားပါ၊ ဆက်သွားပါ ... အင်တာနက်အကြောင်းအရသာရှိတဲ့အရာကဒရာမာနှင့် xD ကိုလှည့်စားနေသည်
ဟားဟားဟာငါတို့အတွက်ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ... သူ့ကိုသူ့ကိုဘယ်လိုလှည့်စားပေးသလဲဆိုတာသူ့ကိုကျွန်တော်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ ဒီမှာဒီမှာသွားပြီးသူ့ကိုပဲ fuck ဆိုတဲ့ပဲပြန်ပြောပါမယ်။ HAHA repeat
Nah Alba, ငါတို့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမရှုပ်ထွေးမရှိပါ ... ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းသူတို့လိုချင်တဲ့သူနှင့်အတူနေပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ငါ elav နှင့်အခြားသူများအတူတူထင်ကြောင်းသေချာပါတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများနှင့်ဤတွင်ထပ်မံဖတ်ရန်အားရနှစ်သက်ခြင်း ^ _ ^
ပြီးတော့ငါဘောလုံးကိုယောက်ျားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘယ်မှာရမလဲ ... မင်းကိုငါ့ဆီမပို့ရင် .. ကောင်လေးတွေသွားကြမယ် ... LOL !!!
Pf, ငါမာရ်နတ်ရဲ့ထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကော်ပီကူးလိုက်ရင်ဘာထူးခြားမလဲ။ ၎င်းသည် Linux ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်လား။ ကောင်းပြီ ထို့အပြင် အကယ်၍ ၎င်းတို့အလိုရှိပါက (လိုင်စင်ကိုလေးစားခြင်းဟုတ်ကဲ့) ကူးယူနိုင်ပါက၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်။ လာပါ၊ ရယ်စရာတော့မဟုတ်ပါ၊ အားလုံးစနစ်များအားလုံးမှကော်ပီကူးသည်၊ ၎င်းတွင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုကောင်းလျှင်၊ လည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးအတွက်ကောင်းသည်။
သူတို့ကော်ပီကူးတယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး၊ Windows၊ Linux၊ Mac (သို့) BSD ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မူရင်းတခုခုရှိရမယ်
ကျနော်တို့မူရင်းအကြောင်းပြောနေတာလား Ubuntu မှာထိပ်က menu က OSX ကနေကူးယူတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလား။ သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်ရှိဘားသည် Windows7ရှိတူညီသည်မဟုတ်လော ယခုလာကြ၊ ကြိတ်ဆုံကျောက်နှင့်ငါ့ကိုမပေါင်းပါနဲ့။ ငါကိုယ်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောရလျှင်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌အကြံဥာဏ်ကောင်းရှိပါက၎င်းသည် operating system တစ်ခုအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောနိုင်ပါသလား။
Ubuntu မှာထိပ်က menu က OSX ကနေကူးယူတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလား။
သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအနည်းဆုံး uber-man နှင့်စကားပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထောက်ပြတာကသူတို့ကူးယူလိုက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူး၊ အခုသူတို့ကအဲဒါကို "တော်လှန်ရေး" အဖြစ်ပြသနေတယ် ...
နားလည်ပါသည်၊ SWL သည်အိုင်ဒီယာများ၊ ကုဒ်များကို ၄ င်းတို့၏ OS တွင်အကောင်အထည်ဖော်။ ရောင်းနိုင်သည် (သို့) စောင့်နိုင်သည်။ သူတို့က O_O မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်သိသည်။
GPL အောက်တွင်ရှိသောသူတို့သည်ကုဒ်နံပါတ်ကိုယူ၊ သုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုစီးပွားဖြစ်၊ စီးပွားဖြစ် လုပ်၍ ၎င်းမှပိုက်ဆံရရန်နည်းဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
Apple ကသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အိုင်ဖုန်းတွေမှာကူးယူဖို့အတွက်ဒုတိယအနေဖြင့် Samsung ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါကအတူတူပဲ။
ပြနာမှာလုပ်ဆောင်မှုတွင်မဟုတ်ဘဲရလဒ်များဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လူအများတို့၏မသိမှုနှင့်မသိမှုတို့ကြောင့် Windows8 သည်၎င်းကိုမဟုတ်ကြောင်းအရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုစေလိမ့်မည်။ Microsoft သည် Pause / Renew ကိုမိတ္တူများ၊ LiveUSB (HP ပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း) နှင့်အခြားအရာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကငါ့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်
မင်္ဂလာပါနှင့်, တကယ်, site ကိုမှကြိုဆို😀
အဖြေကိုမင်းစိတ်မကောင်းဘူး hope မျှော်လင့်ပါတယ်😉
သင်အဆိုအရ Ballmer သည်လာမည့်မိတ္တူအမြောက်အများကိုပြသပြီးဖိုင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဒီတော့ကိုယ်ကျင့်တရားက "အရာအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်၊ လုံးဝအရာအားလုံးကိုလက်ခံတယ်၊ အဲဒါကို bullshit တောင်မှ ... ဒါပေမယ့်paténtaloဟာလုံခြုံရေး / ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတိုင်းအတာပဲ" ????
အသင်း ၀ င်မဟုတ်ပါ၊ သင့်တွင်ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မူရင်း၊ လေးစားမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ သူတစ်ပါး၏အလုပ်ကိုလေးစားရမည်။
ခင်ဗျားပြောတာကမင်းမှာ xD ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာအနိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပထမ ဦး စွာသူတို့က code ကိုပိတ်လိုက်သည်ဟုတိုင်ကြားသည်၊ ထို့နောက် code ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များ LOL ကိုကော်ပီကူးသည်ဟုတိုင်ကြားသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တာကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ GPL အောက်မှာအရင်ကအကောင်အထည်ဖော်ပြီးရင်သူတို့ကငါတို့ကိုယူသွားလို့မရဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မူပိုင်ခွင့်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သော "အတွေးအခေါ်၏မူပိုင်ခွင့်များ" ကိုသာဆန့်ကျင်သည်။ မြင်သာထင်သာမရှိသည့်အပြင်ပေါ်ထွက်လာသောအရာတစ်ခုကိုသင်မည်သို့ငရဲမူပိုင်ခွင့်ပြုသနည်း။
Barnes နှင့် Noble တို့ကတရားမဝင်ငွေများကိုပါးနစ်သို့လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း KDE နှင့် Gnome တို့က Android ထုတ်လုပ်သူများထံမှရရှိသော MS WOS 8 မိတ္တူတစ်ခုစီမှငွေအနည်းငယ်သာရရှိကြမည်ဆိုလျှင် ၀ မ်းသာစရာပါ။
file system နှင့် ပတ်သက်၍ BTRFS နှင့် ZFS မှအကြံဥာဏ်များကိုငှားရမ်းခြင်းသည် Android တွင် FAT ကိုသုံးခြင်းထက်သင့်အား ပိုမို၍ ကုန်ကျနိုင်သည်။ သူ၏ Tom Tom သည် ext2 or ext4 သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ရာဝယ်လိုအားကြောင့် ဒေါ်။
ငါခင်ဗျားကိုအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်၊ ပြproblemနာကသူတို့လိုင်စင်ကိုမလေးစားဘူး၊ ထုတ်ကုန်စတင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ချေးထားတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲလိုက်ရင်ငါဝမ်းသာတယ်။
ပြနာကသူတို့ကော်ပီကူးတာမဟုတ်ဘူး၊ အချို့သောရှုထောင့်တစ်ခုမှာချီးမွမ်းတာဖြစ်လို့ပြtheနာကသူတို့ကူးယူပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုပိတ်ထားပြီးဘယ်သူ့ဆီကိုငါလုံလောက်တယ် think think !!!
သူတို့ဟာကူးယူရတာအဆင်ပြေပေမယ့်သူတို့ကတစ်ခုခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်ကော်ပီလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ GPL လိုင်စင်တွေအရ code ကိုထုတ်မထုတ်ဘဲခိုးကူးတာခံရတယ်၊ သင်ကုဒ်ထုတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ၀ င်းဒိုးများက၎င်းကိုမှန်ကန်စွာလုပ်လိုကြကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည် (sarcasm) ) ။
Microsoft နှင့်၎င်း၏ "ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစိတ်ကူးများ။ " အဘို့အကောင်း
Qt နှင့် KDE အမှတ်အသားများသည်အလွန်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် KDE နှင့်အတူ distro ကို ၆ လကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး W6 ကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့စန္ဒီသည်သတ္တိရှိရမယ်။ ယောက်ျားတွေကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ Linux မှာပထမဆုံးပထမဆုံးဖြစ်သည်။ Apple နှင့်၎င်း၏ touch screen တို့က accelenometers နှင့်အတူလက်လက်၏အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကကော်ပီကူးတယ်၊ မင်းရင်ဘတ်ထဲကသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ ဒီ W8 ရဲ့စားသုံးမှုကဘယ်လောက်အထိရှိမလဲ။
မဟုတ်ပါ၊ သဲသဲကွဲသည်ကျွန်ုပ်သိသူအတွက်လက်ဆောင်မဝယ်သေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုရေးပါ
hahahahaha ငါ jhehej BAZINGA ဆောင်းပါး၏အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ငါ့မှာကွန်ပြူတာတစ်လုံး (လက်တော့ပ်) တစ်ခုသာရှိပြီးငါ့ရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်က KDE နဲ့ Debian ပဲ။
OEM လိုင်စင်အပါအ ၀ င် Windows တံဆိပ်တွေအားလုံးကိုလည်းဖျက်လိုက်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒါဟာပျော်စရာပဲ။
Windows ကိုစိတ် ၀ င်စားစေမယ့်တစ်ခုတည်းသောသတင်းက free system အတွက်အားနည်းနေတာပဲ။
သုံးခုကကျွန်တော့်ကို operating system အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သင့်ရဲ့လိုင်စင်, ကလုံခြုံနှင့်သင်၏မြန်နှုန်းပါစေ။ သင်မြင်ရမည့်အတိုင်း Windows သည်ကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးနှုန်းဖြင့်သာသုံးနှုန်းသည်။ ငါ့အတွက်မလောက်ဘူး
ငါ Windows ၏အောက်ခြေရှိတစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်တိုင်းသတိရစေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ယခင်ကထက် Laptop ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုကြောင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (၎င်းသည်ထင်မြင်ချက် / Windows hehe အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသကဲ့သို့) ။ 🙂
စကားမစပ် it ပြောရန်မေ့ခဲ့သည်
Artescritorio.com မှကျွန်ုပ်ရိုက်ယူခဲ့သောနောက်ခံပုံနှင့်နောက်ခံပုံများ။ http://artescritorio.com/tag/windows-8
ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ချင်တယ် အကယ်၍ ၎င်းသည် win7၏အမှားအယွင်းများကိုစောင့်ရှောက်ပါကသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်အဖုံး၏ပြောင်းလဲမှုသာဖြစ်ပါက။
ငါလည်းကြိုးစားမယ်၊ ငါ Developer Preview ကိုစမ်းပြီးပြီ၊ startup ကအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုကြည့်ချင်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ linux အကြောင်းကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကော်ပီလုပ်နေသရွေ့ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီဆိုရင် Windows7ကနေ 8 အထိသွားမယ်။
ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ ဤ OS (linux နှင့် win) သည်မတူညီသောအရာများကိုလိုချင်သောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်ကကစားချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းသိတဲ့အကြပ်အတည်းထဲငါရောက်နေတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ Linux နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခုလုပ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် win and play နဲ့ငါဆက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် linux လိုလုပ်ဖို့တော့မလွယ်ကူပေမဲ့လည်းငါအလုပ်လုပ်တယ်၊ program လုပ်တယ်။
ငါ Xbox360, Wii နှင့် PlayStation3တို့ကိုတူညီသည့်နေ့၌ပင်ကစားခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာများသည် haha ​​ကစားရန်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်များအတွက်ဖြစ်သည်။
ပြနာကငါ့မှာမရှိဘူး ... LOL !!
@ KZKG ^ Gaara သည် ၂၃ လက်မအရွယ် mouse နှင့် keyboard ဖြင့် Battlefield3အပြည့်အဝဂရပ်ဖစ်ကိုရိုးရိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနှင့်ကစားခြင်းသည်မတူပါ။
ငါဒီတစ်ခုမကစားခဲ့ဘူး၊ အရာအားလုံးမှာသူ့ကောင်းကျိုး၊ ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ထင်တယ်
Console ဂိမ်းများသည်စျေးကြီးလွန်းပြီးစျေးလည်းကြီးသည်။ ထို့အပြင်သံချေးများသောနှလုံးနှင့် mmoprg ကဲ့သို့သောဂိမ်းစက်များစွာရှိပြီးနောက်ဆုံးတွင်ရေငွေ့ကစားခြင်းသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော xd ဖြစ်သည်။
PS3 ကိုဟက်ပြီးဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်ယူရို ၆၀ သို့မဟုတ်ယူရို ၇၀ ပေးရမည့်ပုံကိုကြည့်ပါ
၎င်းသည် ps3 € 249 ၀ ယ်ခြင်း၊ မည်သို့ hack ရမည်ကိုမသိခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ အခြား ps3 ရှိသူတစ် ဦး အားသင့်အတွက်ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့်သူ့ကိုငွေအနည်းငယ်ပေးရ၊ ကျွန်ုပ် pc ၌ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်မှာမရှိ ပိုသုံးမယ်ဆိုရင်ယူရို ၂၅၀ ပေးရတဲ့ console တစ်ခုမှာလုပ်ဖို့ပြောနေတာပဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ XD ။ Ahh နှင့်နောက်ဆုံးတွင် console သည်သီးသန့် LOL ဖြစ်သည်။
သို့သော် hacks သည်မတန်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် PS3 မရှိခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်များက PS2 မှကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သူbakalကိုလောင်းအာတာသို့ယူရို ၃၀ (သို့) ထိုမျှလောက်ကုန်ကျခဲ့သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခါသင်၏ Playstation တိုးတက်ရန်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုပေးဆောင်ပါ။ အသုံးပြုသူကိုပေးဆောင်ရန်ယူရို ၃၀ ပေးရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။
ဘယ်လို hack ရမည်ကိုလူတိုင်းသိသည်မဟုတ်ပါ
ကောင်းပြီ၊ သင်လေ့လာပါ၊ သင် OS ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကို သိ၍ မွေးဖွားလာသည်လား။
လူတွေကို hacking လုပ်တာကသူတို့ကို shit ပေးတာလား၊ OS ဆိုတာအတူတူမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သင်ကွန်ပျူတာကိုအရှိန်မြှင့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး
နည်းလမ်းမရှိ။ ဂိမ်းရှုပ်ထွေးမှုနှင့်စွမ်းအင်တို့တွင်မည်သည့်အရာကမျှကွန်ပြူတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင် LOMAC ကို console တွင်ဖွင့်နိုင်သလားဆိုပါစို့၊ Controller ရှိခလုတ်များကုန်နေသည့်ရေဒါကိုအသုံးပြုမှသာဖြစ်နိုင်သည်။
လာစမ်းပါ! ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီး Pokemon ဂိမ်းများကိုဆက်လက်ဝယ်ယူနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် 23DS ကို ၀ ယ်ယူပြီး ဖြစ်၍ သူနှင့်တစ်ခါတစ်ရံသူနှင့်မှတ်ချက်ပေးသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ပါစေ၊ ရှေ့သို့သွားပါ။ ဂိမ်းများကိုလက်တွေ့ဘဝမှလွတ်မြောက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းများ (သို့) ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဲ့သို့အနာဂတ်၌ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုမြင်တွေ့သော xD တို့ကိုကစားစက်များနှင့်ကစားနေတုန်းပဲအမြဲတမ်းမြင်ဖူးခဲ့ဖူးသည်။ ဟားဟား
ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား။ ။ ။
လာစမ်းပါ! ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ Pokemon ဂိမ်းများကိုဆက်လက်ဝယ်ယူနေပါသည်
ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုမစွန့်လွှတ်မှီတိုင်အောင် (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်တွင်မှားသည်ဆိုလျှင်) ကျွန်ုပ်သည်ပိုကီမွန်ဂိမ်းများကိုကစားနေစဉ်တွင်အဆင့် ၁၀၀ ရှိနဂါးတစ်ဝက်နှင့်ရေခဲတဝက်ကိုလိုချင်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ ယခုသူတို့ကိုကလေးငယ်များအတွက်ပျိုးခင်းအဖြစ်မြင်သည်။ Play Station ကကျွန်တော့်ကိုမကစား ခဲ့၍ ငါဒေါသထွက်မိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မှဂိမ်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုစုပ်ယူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးများသို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာရာရှိကလေးငယ်များအတွက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စန္ဒီ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး စလုံးဂိမ်းကစားရန်အသက်ကြီးလွန်းသည်ဟုထင်ရသည်။
သငျသညျ carcamal ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းငါသိ၏
ဂိမ်းစက်များအတွက် ... အခြားအရာအားလုံးအတွက် Gnu / Linux
ဒီယေဂို Ferreyra ဟုသူကပြောသည်
MSFT ဟာ Linux operating system သာမက OSX ကဲ့သို့သောအခြား operating system များမှအကြံဥာဏ်များကိုအမြဲယူထားသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။
အချို့သောအတွေးအခေါ်များ၊ သူသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ထို့အပြင်ဤအချက်ကမျှတမှုမရှိဘဲ၊ အတွေးအခေါ်များသည်၎င်းတို့အားအများပြည်သူသိရှိစေရန်ပြုလုပ်သူများမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သူများမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြနေသည်။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သဘောမတူတာက MSFT ဟာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ post ရဲ့အဆုံးမှာပြောတာပါ။ Metro UI သည်ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ပြီးအခြားနေရာများမှခိုးယူခံရသည်ဟုသင်မထင်ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကို MSFT ကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းလိုပါက၎င်းတို့သည် twitter (@ 42pe) တွင်တိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်များသည်မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
Diego Ferreyra ကိုပြန်သွားပါ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post ။ M $ အကြောင်းရွတ်ဆိုသောဝေဖန်သုံးသပ်သူအများစု၏ရယ်စရာကောင်းသောအရာမှာသူတို့ Microsoft ၏ OS နှင့် IE ကိုပင်ဒီဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အမည်နှင့်အတူ OS နှင့် browser ၏ icon များရှိသည်။ ထိုသူတို့ကဟဟ, လျှို့ဝှက်အကြောင်းပြောဆို။
ဒီမှာမှတ်ချက်ပေးသူအများစုကသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်၊ အလုပ်သမားလိုချင်တဲ့ OS သုံးခွင့်ပြုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနည်းတယ်၊ ဒါကြောင့် Windows သင်္ကေတကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။
သေချာတာပေါ့, linux စို့သောကြောင့်။ ပြတင်းပေါက်များကိုကိုင်ထားပါ
ကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ၎င်းသည်တူညီသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Windows သည်အခြား OS မှနည်းပညာအချို့သို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်များကိုကော်ပီကူး။ သင်၏ PC ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်။ ပြီးရင်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒီဟာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် W8 ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာတဲ့ PC အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အိပ်မပျော်တော့ပါဘူး။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Linux ကို format ချပြီး install လုပ်ဖို့ပါ။
ငါကိုပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမသိပါဘူး၊ အကယ်လို့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကို Linux (ကူးယူထားတာအတော်များများကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်) ဒါမှမဟုတ်အဖြေတွေကိုပရိတ်သတ်တွေရဲ့စာသားကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖတ်မိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့် "လို့ထင်ရတယ်" why ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းကိုပြောပြပေးပါ
လူးဝစ္စ၊ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါလေးစားပေမဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည် Operating Systems နှစ်ခုလုံးကိုကြိုးစားပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာမျက်စိမမြင်ဘဲအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ကောင်းကျိုးဆိုးများကိုမည်သို့သိနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
LiveCD တွင် Precise Pangolin's Alpha2 ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကလွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကဤတွင်ရှိနေသည်။ ငါပြတင်းပေါက်တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်။ အနားကိုကပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Compiz Grid effect ကိုရတယ်။ သူက Windows Seven မှာကဲ့သို့ Miraaa သည် Ubuntu ကကူးယူခဲ့သည်။ ¬¬
KZKG ^ Gaara ကဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် KDE တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဥပမာ Windows ကိုမသုံးမီကဖြစ်သည်။ သို့သော် Windows တွင်ယခုရှိနေခြင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများက၎င်းသည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်ဟုထင်ပြီးအမှန်တကယ်မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် Windows ဆိုတာ Linux ကနေကူးယူတာကိုလက်ခံထားတယ်။ သူတို့က copy လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် Linux မှာလည်း copy လုပ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူး။ taskbar သည် Windows 95 တွင်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် gNome, open file windows များ၊ အိုင်ကွန်၏ previews များကို Linux တွင်တီထွင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့၊ Ubuntu ၏မကြာသေးမီက interface တွင် - ဘယ်ဘက်ရှိပုံနှင့်ဆင်တူသည့် icon bar နှင့်၎င်းပေါ်လာသည်။ Mac ဘား၊ ဒါကြောင့်ငါ Linux မှာမွေးစားပြီးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံပိုကောင်းတဲ့တခြားအရာတွေကိုစာရင်းပြုစုနိုင်တယ်။
လူအတော်များများဟာလူတွေဟာသူတို့ကသူတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့တာကိုငါနားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတာကဒီအရာတွေအကောင်အထည်ဖော်ရင်တောင် OS တစ်ခုချင်းစီရဲ့ interface ကအသုံးပြုသူအတွက်အသုံးဝင်သည်။
သို့မဟုတ်လက်ဝဲဘက်ရှိအိုင်ကွန်ဘားနှင့်အတူမကြာသေးမီက Ubuntu interface နှင့် Mac ဘားနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
Ubuntu (သို့) Winbuntu လို့ငါခေါ်လိုက်တာကသီးခြားကိစ္စတစ်ခုပါ။ ကော်ပီလုပ်တဲ့သူ၊
Arturo Delgado ဟုသူကပြောသည်
Arturo Delgado သို့ပြန်သွားပါ
ငါမသိဘူးအမြဲတမ်းအတူတူပါပဲ ... ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုဘာပြောနိုင်မလဲ .... ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေကအရမ်းမိုက်မဲပြီးမတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်။ သူတို့လုပ်တာက windows bunnies တွေပါ။ windows တွေကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ win-style packages တွေပို့ပေးလို့ပေါ့။ တခြားတီထွင်ခဲ့တဲ့အခြား windows တီထွင်ထားတဲ့ version တွေထက်ပိုပြီးသာယာသည်။ အခြား operating အများပြည်သူသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်စနစ်များသည်ဘယ်သောအခါမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၀ င်းဒိုး၏ဘက်စုံသုံးမှုနှင့်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ၀ င်းဒိုးကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသောပမာဏသည်အလွန်ကောင်းသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအသစ်သောအသိဥာဏ်ရှိသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုထုတ်လုပ်သင့်သည် သူ့ဟာသူပြုပြင်မွမ်းမံပြီး၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် (ငါ hahaha ကို hallucinating လုပ်ထားပြီးပြီ) သို့သော်ယခုရှိသောအရာအားလုံးထက်ပိုကောင်းမည်
ဟုတ်ပါသည်ဟုတ်ပါသည်။ စျေးကွက်၏ ၉၅% သည် Microsoft သို့မဟုတ် Machintosh ကိုအဓိကထားသောအခါ Linux သည်သုံးစွဲသူများကိုမည်သို့ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်မည်ကိုပြောပြပါ။ Linux ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးကိုဆာဗာတစ်ခုအနေနှင့်ဂုဏ်ယူစေသော်လည်း၎င်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့်မိုက္ကရိုဆော့ဖ်တို့၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အကြောင်းမှာ PC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ချုပ်နှောင်ထားမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည့်အတွက် Mac နှင့် Windows သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူစနစ်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သောပိတ်ထားသည့်ပရိုဂရမ်များနှင့်ဝေးကွာပါသည်။
ဂိတ်စ်က Windows နှင့်သူ၏အစောပိုင်းကာလများတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်“ ငါတို့ကောင်းသည်ဟုထင်သောအရာများကိုငါတို့ကော်ပီကူးသည်” ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကသူကထိုအရာကိုဝန်ခံခဲ့သည် (အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကကျွန်ုပ်အကြောင်းပြောဆိုသည်) သူတို့မှားယွင်းမဟုတ်ပါ) သူတို့ကအခြားတစ်ခုနှင့်အတူထွတ်ထိန်တူညီသောအရာများကိုသတိပြုမိခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယခုဘဝတွင်မပြောင်းလဲတော့သည့်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် Linux သို့မဟုတ် Mac ကိုဂီနီဝက်များအဖြစ်အသုံးမပြုတော့ဘဲပျင်းရိနေပြီဖြစ်သည် တီထွင်ရန်နှင့်ဝေးနေဖြင့်။
"Windows သို့ Linux ကူးယူပါ"
ယခုအခါ Microsoft ကသင့်အချက်အလက်များကို SkyDrive တွင်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သောစုစုပေါင်း 25GB ဖြင့်သီချင်းနှင့်ရုပ်ပုံများသာမကသင်၏သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့်အခြားအရာများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
Ubuntu One ရဲ့တည်ရှိမှုစိတ်ကူး
အလှည့်အပြောင်းသည် Mandriva တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သော Maria Castañaအချိန်ကတည်းက Mac ၌ရှိသည်။
သို့သော်၎င်းသည် Canoni $ oft ၏တီထွင်မှုဖြစ်သည်ဟုပြောရမည်။ ¬¬
ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ Mandriva နှင့် Mageia ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။ 🙂
Bill Gay သည် GNU / Linux ကိုအမြဲတမ်းကူးယူနေသည်။
အကယ်၍ Bill Gay ကို Bill Gay ဟုခေါ်လျှင်သင်အမှားကြီးတစ်ခုကျူးလွန်မိလျှင်၊ ဘီလ်ဂိတ်သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တွင်မရှိတော့ပါ၊ သူ၌ရှယ်ယာများပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်းသူပိုင်ဆိုင်သောရာထူးကိုဆက်လက်မထမ်းဆောင်တော့ပါ။
သို့သော်သူသည်ထိုနေ့၌ပြန်ကူးယူခဲ့သည်မဟုတ်လော။ Bill Gay သည်ကူးယူပြီးပါပြီ
တစ်စုံတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ Ubuntu နှင့်၎င်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားတာလီဘန်အစွန်းရောက်ဂိုဏ်းများရောက်ရှိလာသည့်တိုင် linux ၏အားနည်းချက်များကိုတိုင်ကြားခြင်းသည် linux ကိုဘာသာရေးအယူအဆအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲယုံကြည်ရသည့်ကြက်တူရွေးများကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်ကိုစစ်ဆေးဖို့နှောင့်အယှက်မရှိဘဲ, ဆောင်ပုဒ်များနှင့် decalogues ။
linux ရဲ့ပြproblemနာကအိမ်သူအိမ်သားသုံးစွဲသူများအတွက်စရိုက်လက္ခဏာများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ မိသားစုဝင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး အတွက် linux ထည့်သွင်းခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့သည်သင့်ကို Windows သို့ပြောင်းရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ကလေးဆန်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပြissueနာရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှမပြောချင်တဲ့လုံခြုံရေးပြissuesနာများ ( http://www.ubuntu.com/usn ) ။ ဟုတ်ပါတယ်, တာလီဘန် linux - ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည် - ဤအရာအားလုံးအတွက်အဖြေများရှိသည်။ ငါနှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းတူညီသော "စံ" ဆင်ခြေဖတ်နေနှင့်ကြားနာခဲ့,
သို့သော်နောက်ဆုံး၌အဖြစ်မှန်သည်ခေါင်းမာ။ လူအများမိမိတို့နေရာတွင်ထားခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင် linux site သည်အိမ်သုံးကွန်ပျူတာများ၏ ၁% ကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။
(ထိုမျှမက၊ Windows သည်ရောင်းသောကွန်ပျူတာအများစုတွင်တပ်ဆင်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် Dell နှင့် Ubuntu ၏ဖြစ်ရပ်နှင့် Ubuntu Taliban ၏ Ubuntu ကွန်ပျူတာများကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ပါက Dell အပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါသလား။ )
ငါ 2005 သို့မဟုတ် 2006 ခုနှစ်ကတည်းကပြတင်းပေါက်မရှိဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ linux နဲ့အရမ်းပျော်တယ်။ SUSE မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တွင် Ubuntu ရှိသည်။ ငါကကုန်ကျသည်ကိုပေးဆောင်စိတ်ထဲမထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏လျှင်။ M $ အမှု၌ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်ကာကာက Linux အကြောင်း link တစ်ခုပေးတယ်။ http://quepagina.es/blog/linux/ အနတ္တကိုမပြောရန်၎င်းကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ပါ။
သင် lin နှင့် win အကြောင်းအနည်းငယ်စကားပြောလိုပါကအမြဲကြိုဆိုသည်။
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်တာလီဘန်တို့ကဲ့သို့ပင်အစွန်းရောက်ဝါဒနှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်။ ဤအမျိုးအစားများသည် Ubuntu အတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါအခြား ၀ င်းဒိုးများ၊ ၀ င်းဒိုးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူများစုနေကြသည်။
အမှန်တကယ်တွင် GNU / Linux တွင်ပြproblemsနာများရှိသော်လည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်အလွန်မှားယွင်းနေသည်။ Ubuntu အားနည်းချက်များကိုထုတ်ဝေထားသော link တစ်ခုကိုသင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တိတိကျကျပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်။
Linux ကိုအမြဲတမ်းသတ်ဖြတ်တာကသူတို့ဟာ application တွေနဲ့ interfaces တွေလုပ်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ကတော်တော်လေးရုပ်ဆိုးတာကိုလုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကအောင်မြင်သွားတာပေါ့။
Gabriel Rivero ဟုသူကပြောသည်
Hmm ကောင်းပါပြီ၊ ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်သည် kde ထဲသို့ဝင်ပါ၊ အသုံးဝင်ပါက gnome3၊ ကျွန်ုပ်အစာရှောင်လိုလျှင် lxde ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကို ၀ င်းဒိုးဒေါ်လာနှင့်ဘယ်တော့မျှမလုပ်နိုင်ပါ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည် interfaces များသည် ပို၍ အရုပ်ဆိုးဖွယ်ရှိသော်လည်း qt ကိုအခြေခံသော application များမှာမူကွဲပြားခြားနားပါသည်
Gabriel Rivero အားပြန်ပြောပါ
Gabriel Rivero မှကြိုဆိုပါသည်။ အမှန်မှာ Windows တွင်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် +1
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် Windows ၏အသွင်အပြင်သည် Linux ထက် ပို၍ သာလွန်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Linux သည် Mac App Store ကိုလုံး ၀ ကူးယူထားသည်။ ၎င်းတို့သည်တူညီနေပြီး၊ Linux အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။
ဤသည် ... ပထမ ဦး ဆုံးအပေါင်းတို့၏ကြိုဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားထင်မြင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Linux App Mac ကိုဘယ်လိုကူးယူခဲ့တာလဲ။ သင်ဘာအကြောင်းအထူးပြောနေသလဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ubuntu Store သည် Mac App Store နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းသည်၊ ၎င်းသည်အထူးအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်မည်သို့မည်ပုံစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတူဒီကဗျာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ကိုမသုံး၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ၁ distro သည် software center တစ်ခုကိုကော်ပီကူးသည်၊ ၎င်းသည် Linux ကူးယူလိုက်သည်နှင့်မတူပါ၊ Ubuntu အနည်းငယ်ပိုကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည် လူသိများသောကြောင့်၎င်းသည် Linux ကို OS အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်မဟုတ်သကဲ့သို့အခြားဖြန့်ချိမှုများလည်းအလားတူနည်းလမ်းများပြုသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ငါနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့သည့် Ubuntu, Debian, Xubuntu, Asturix တို့ကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းတို့သည် Apple မှကူးယူထားသည့် software center တူညီသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မှားသည်မဟုတ်ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ Linux သည်ကူးယူမှုမှကင်းလွတ်သည်မဟုတ်။
Apple ၎င်းသည်အခြား Operating Systems သို့မဟုတ် interfaces များမှလည်းကူးယူထားသည်။ သူတို့ဟာဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာသူတော်စင်တွေမဟုတ်ကြဘူး။ ဒါကပုံမှန်ပါ။ ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ရင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကအခြားတစ်ခုကိုကော်ပီကူးတယ်ဆိုတာတောင်မှနားလည်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါနောက်ဆုံးပေါ်အက်ပဲလ်သတင်းနောက်ဆုံးထွက်သတင်းနှင့် GNU / Linux တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနှိုင်းယှဉ်ထားသောဆောင်းပါးများစွာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ စီးရုံစီးပါ ဒီမှာ.
Daslive စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘီးကိုပြန်လည်တီထွင်လို့မရပါဘူး။ Mercedes က Audi ကိုကူးယူပြီးကားလုပ်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်အဘယ်သို့ဆိုင် XD?
Ubuntu သည် Mac ကိုကူးယူပြီးပြီဟုပြောခြင်းသည် ပို၍ မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် Linux သည်၎င်းကိုကူးယူထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ 🙂
အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် distro ကူးယူထားသည့် Winbuntu ဖြစ်သောကြောင့်၊
အကယ်၍ Windows သည် Linux သည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမြဲတစေအငြင်းပွားနေရသလောက်အလွန်ဆိုးရွားလွန်းလျှင်၎င်းသည် Linux သည်အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သမျှတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအရာ ... အကယ်၍ ၎င်းသည်စျေးကွက်ဝေစု ၁% မျှသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ??? ??? ငါအမြဲဒီသံသယရှိခဲ့ပါတယ်
သင့်ရဲ့စာရင်းဇယားကို update လုပ်ပါ။ အဆိုပါကြေး 9-10% ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအရာများအပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် OEM ပစ္စည်းများကြောင့်ကလေးမထင်ပါသလော။
သင်မသိသောအမှု၌ Linux စနစ်များပင်လျှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုလေ့လာသင့်သည်။ Gnu / linux distros အများစုတွင်စီးပွားဖြစ်ကုဒ်ရှိသည်၊ distros များ၏ ၉၇% သည်အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ အခမဲ့သောစနစ်ရှိစီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာမင်းကမင်းရဲ့ system ကိုမင်းလိုချင်သလိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ kernel ကနေစရမယ်။ ဒီမှာ linux kernel ကိုဘယ်လိုပရိုဂရမ်ရေးထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူလဲသိလား ??? အကယ်၍ သင်ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည်လိမ်လည်မှုသာဖြစ်သည်၊ စစ်မှန်သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကို အသုံးပြု၍ လွတ်လပ်သော OS တစ်ခုရှိခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုဆိုရလွယ်ကူသည်။ အခမဲ့ OS ရှိခြင်းသည်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့သိတာက distros တွေကနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သူတို့မှာသူတို့မှာ free software ရှိတာကိုသူတို့မယုံဘူး။
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသနည်း။ ... သို့သော်သူတို့သည်သင်ဤ OS နှင့်ပြုသောအမှုအနတ္တကိုမြင်ပြီလော။
ယခုငါကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်သည်ကျွန်ုပ်မည်မျှမည်မျှကောင်းမွန်သည်ကိုရှင်းပြရန် (ဤတွင် globs ကိုကျွန်ုပ်အပေါ်သို့အပ်နှံသည်) အဘယ်ကြောင့်ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ် ...
MICROSOFT သည်အမြတ်အစွန်းများနှင့်အနိမ့်ရောင်းအားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရောင်းချခြင်းမရှိသောတက်ဘလက်များစုဆောင်းမှုပမာဏကို APPLE နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ... ၎င်းသည်တွဲဖက်ထားသောတက်ဘလက်များကိုသုံးနိုင်သည်ဟုဆိုသည် ...
၂၅ Gig cloud ... အရာရှိသူတို့၏ကျန်းမာရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှ file များရှိပါသလား။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လွှင့်ထားသည့်သီးသန့်အရာများရှိပါသလား။ သို့သော်တံခါးများသည်တံခါးများကိုဖွင့်ရန်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်သူခိုးများမသိသောသူများအတွက် Cloud ဆိုသည်မှာသင်၏အရာဝတ္ထုများကိုသင်ဆွဲချနိုင်ပြီး၎င်းအားလုံး ၀ ထိခိုက်လွယ်ကာလူတိုင်းအတွက်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီတီထွင်ခဲ့သူလင်းလင်းသူကားအဘယ်သူမသိ။ )
စာရွက်စာတမ်းလွှဲပြောင်းခြင်းနံပါတ်များကိုပြောင်းလဲခြင်း ... ရာစု၏မဟာဖောလွ ......... သင်ဟာကျွန်တော့်ကိုအစိမ်းရောင်ဘားတစ်ခု၊ အပြာရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရောင်ကွေးသောထွက်ရှိသည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတည်းရှိသလားဆိုတာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ .. ရလဒ်ရလဒ်သင်၌ရှိသည့် Ram Memory ပေါ် မူတည်၍ သင်စာရွက်စာတမ်းအနည်းငယ်သာရှိပါကလျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကော ... ကောင်းကင်ပေါ်ကငိုကြွေးပါ ... ဒါပေမဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ disk ပေါ်ကပုံတွေကိုမသိဘဲမသိတော့ဘူးဆိုရင်၊ လူတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာဘာလဲ အကယ်၍ သင့်တွင်ဖိုင်တွဲများနှင့်အမည်များဖြင့်စီထားသောအရာအားလုံးရှိပါက၎င်းကိုထည့်ရန်မလိုပါ။
ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ ... NTFS က "MICROSOFT တီထွင်မှု" တစ်ခုအတွက် ၄ င်းတို့ကိုပြောင်းလဲစေတယ်၊ ​​Ubuntu အသုံးပြုသူများသည်သူတို့နှစ်သက်ရာအပိုင်းအစများကိုပန်းသီးတစ်လုံးထဲမှာမဖန်တီးနိုင်အောင်လုပ်လိုက်တယ် ...
မိုက်ကရိုဆော့မှနောက်ထပ် BIG SHIT ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်
Mr hyde အားပြန်ပြောပါ
OSX Mountain Lion ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ဆွေးနွေးကြသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အမှားမကင်းပါ၊ တစ်ခုတည်းသော backup စနစ်နှင့်လုံခြုံရေးပြproblemsနာအနည်းငယ် ရှိ၍ Linux သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အမှားများပိုမိုဆိုးရွားလာပါက Windows7ငါအများကြီးတိုးတက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် OSX ကမင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးလိုချင်ရင်အကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်၊ ကြာသပတေးနေ့မှာပျော်မွေ့ပါ။
ကောင်းပြီ၊ သင် 1999 သို့မဟုတ်ဒီထက်စောသော Linux ဗားရှင်းကိုသင်သုံးခဲ့ပြီးပြီ၊ ၎င်းကိုသင်ကစားရန်သာအသုံးပြုသည်။
Linux Mint 13 တွင် KDE ပါ ၀ င်သောအတွေ့အကြုံရှိသူတ ဦး က Windows7ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်သည်။ သို့သော် 8 သည် KDE နှင့်တူပါကကျွန်ုပ်မအံ့သြသင့်ပါ။
Linux ဆိုတာ kernel ဖြစ်တယ်။ linux ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်၊ စမ်းသပ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ kernel ဗားရှင်းကိုသင်သုံးပြီးမြင်ဖူးလို့ပါ။ အမှန်တရားလား
ကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုနားမလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Linux kernel ကိုသုံးသောဖြန့်ချိမှုများအမြောက်အမြားရှိပြီး၊ ၎င်းတို့၏ Ubuntu, Mint, Fedora, Arch ဟုခေါ်နိုင်သောအခမဲ့ကိရိယာများနှင့်အချို့သောစီးပွားဖြစ်အရာများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြသည်။ OpenSuSe နှင့်ရှည်လျားသော etcetera ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ညာဘက်ဟာ့ဒ်ဝဲအောက်မှာသူတို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ Linux သည်ယေဘုယျ GNU / Linux operating systems ကိုရည်ညွှန်း။ “ တည်ငြိမ်သည်” သို့မဟုတ်“ တည်ငြိမ်မှုမရှိ” ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ငါ (ဥပမာ) Debian Squeeze ကိုအသုံးပြုသည်။ မည်သည့် OSX နှင့် Windows ၏လက်ရှိမူကွဲသည်ဤဗားရှင်းထက် ပို၍ တည်ငြိမ်ပြီးလုံခြုံမှုရှိသည်ကိုသိလိုသည်။
@YoSoyDario ကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရူးအမူးစွဲလမ်းသူများ၊ plagiarists နှင့်အသုံးမကျသူများစွာရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့ဖန်တီးထားသော operating system ကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုရမည်။ ၀ င်းဒိုးမှကြိုဆိုပါသည်»
Mepa သူတို့ hehe, တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးကူးယူရန်မေ့လျော့
@Yao Ming ဟုသူကပြောသည်
ငါ GNU Linux သည် Windows 8 ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာဖွင့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုသည်။ Linux လုံခြုံရေးသည်ဗိုင်းရပ်စ်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သူ့ဟာသူပျက်စီးစေသည်။ 64bits တွင်အလွန်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောသေးငယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်မှုသည်ဘယ်မှာလဲ ???
အစကတည်းကပင် Windows 8 ၏အမြန်နှုန်းသည် System ကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် Hibernate သို့သာသွားသည်။ ¬¬
အကယ်၍ သင်မသိခဲ့ပါကကွန်ပျူတာပေါ်တွင် hibernation ကသင်ပိတ်ပြီး၎င်း၊ သင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါ, hibernation သည်အလွန်နှေးသည်။ ကွန်ပျူတာရှိ hibernation ကထိုအရာမှထွက်ခွာသွားသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါ၊ သိမ်းထားသောအခreservedက်အလက်အခreservedက်အလက်မpartားကိုရယူပိုင်သည်။
Windows 8 လုပ်တာကသူက board ပေါ်ကချစ်ပ်ကိုဆဲလ်ဖုန်းသာမကပရိုဂရမ်ကိုပရိုဂရမ်တင်ပြီးဗုံးတစ်လုံးနဲ့စတင်ဖို့ကျောက်ချရပ်နားတာပါ။ အဲဒါကို UEFI ignition လို့ခေါ်တယ်။ ဤစနစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဘုတ်ပြားများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ လျင်မြန်စွာဖွင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၌ ၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။ Hinbernarse သည် tablet နှင့် pc များအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောခေတ်သစ်စက်နှိုးစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုကျောက်ချရပ်နားရန်အလွန်ကွဲပြားသည်
ဟက်ကာဟင် Linux သည်မည်သည့်ဂြိုဟ်မှလုံခြုံမှုရှိသည်ဆိုသောမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးသည် linux အခြေပြုစနစ်များကိုအသုံးပြုမည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့သော linux အခြေပြုစနစ်သို့ထိုးဖောက်ရန်သင့်အားငါစိန်ခေါ်သည်။ တည်ရှိပြီးလုပ်နိုင်ပေမယ့် linux မှာကိုယ်ခံအားရှိတယ်။ ၎င်းသည်အမှားပြင်ပြီးပျက်စီးယိုယွင်းနေသောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ရန် Wintendo မဟုတ်ကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်ပြောပါရစေ။ @yaoming မင်းရဲ့စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ Wintendo ကမ္ဘာမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီး Bill Gates ရဲ့အိတ်ကပ်တွေကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်ကျွန်ုပ်ငွေပေးချေကြောင်း၊ သင်မသိရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ကင်းလွတ်သည်ကိုသင်မသိခဲ့ပါက၎င်းသည်ဟက်ကာများ၏လက်နက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux ကိုမည်သည့်အခါမျှပေးချေမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သူသည်သူတို့၏လက်နက်ကိုကူးစက်လိမ့်မည်နည်း။ မည်သည့် operating system အတွက်မဆို Mac, Windows သို့မဟုတ် GNU / Linux သည်မည်သည့် operating system အတွက်မဆိုရေးသားရန်အတွက်ဘာမျှမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရာရာကိုပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အလွန်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးကွန်ယက်များကိုဖောက်ထွင်းပြီး GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသောဟက်ကာများဖြစ်သည်။ သူတို့ Linux အကြောင်းပြောကြသောအခါလုံခြုံရေးအကြောင်းသာပြောကြ၊ အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုပြောပါ၊ သို့မဟုတ်ထိုလုံခြုံရေးအတွက် Linux သာလုပ်သည်လား ???
W8 ကစုပ်ပါတယ်၊ ဒါက porn ကိုကြည့်ဖို့ပဲ။ အဲဒါကိုအသုံးပြုသူများသူတို့လုပ်သည်။ စစ်မှန်သောစနစ်များကို mocosoft မှမပြုလုပ်ပါ
ငါမခွဲခြားဘဲအသုံးပြုသောစနစ်၏, သူတို့ကကြိုက်နှစ်သက်ကြောင့်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူကပြတင်းပေါက်, Linux (distros), macos ရှိမရှိကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီကအသုံးပြုသည်ကနေသမျှကာလပတ်လုံးတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သိတယ်အဖြစ်အရေးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအသုံးပြုသည်ကို၎င်း, ငါကဘယ်လိုအသုံးပြုရန်ပြောတယ်ငါမကရှိသည်ပါဘူး သူတို့အတွက်ကျွန်တော့်အတွက်အချိန်ဖြုန်းဖို့မလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်ထင်တဲ့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုသာမမြင်နိုင်ပါ
ဘာကြောင့် Debian လိုဂိုကိုမြင်ရတာလဲ။ ငါ့မှာတည်ငြိမ်ပြီးပင်ဂွင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်
ငါသူတို့မြင်ရတာကြက်တူရွေးဖြစ်နေပြီ၊ စစ်တိုက်နေစဉ် linux ကပြတင်းပေါက်မှန်လျှင်ကြက်တူရွေးအခွံသည်အခြားသူများကကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နေပြီးကျွန်းပင်ဖြစ်နေသည်၊ အချို့ရောင်းဝယ်သည့်လိုင်စင်များ၊ အချို့ကထောက်ခံကြသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တွင်ကောင်းသောလက်ရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပရီမီယံလက်မောင်းပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ စျေးကွက်၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်သည်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်မှုလည်းမရှိ၊ ဗိုင်းရင့်လင်လင်လင်မ်များက၎င်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လှည့်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငွေနဲ့ပိုက်ဆံအတွက်ဘုရင်ဖြစ်လို့ပဲ။
၎င်းသည်နှစ် ၂၀ အတွင်း Linux လူကြိုက်များလာသောအခါ Virulent windowseros သည်ရန်သူကိုလှည့်ရန်ကြိုးစားပုံပေါ်သည်။ ငွေကကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်ပတ်သွားပြီးဒီမှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိတယ်။ Health Linux နှင့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုလုံးသည်နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Windows 8 သည် crap တစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံး၏မိတ္တူသည် patch နှင့်ချစ်သောမက်ထရိုနှင့်အတူမည်သည့် windows မဆို၊
၎င်းသည်အခြားစနစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် application တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး yamada metro ဖြစ်သည်။
သင်လိုချင်တာက windows 8 iso ဆိုသည့်တက်ဘလက်ကိုစည်းကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စည်းကမ်းချက်ကိုစျေးကွက်တင်ခြင်းနှင့်တက်ဘလက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အလို့ငှာလူအများနှစ်သက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ပါ
ကောင်းပြီငါ windows 8 ကို install လုပ်ပြီး baina အားလုံးကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မကြိုက်တာကဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရောင်တွေပဲ။ ငါပြတင်းပေါက်ကျသွားတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့အရောင်တွေကအပြင်မှာရှိနေတာဘဲ၊ ပြီးတော့မီတာလို့ခေါ်တဲ့ aberration ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး၊ , ယခုအများဆုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ် (အနည်းဆုံးပြော) ။ ငါစူးစမ်းရှာဖွေသူကငါ့ခလုတ်မှာ WTF touch screen ရှိသလောက်ခလုတ်တွေများများစားစားရှိလား။
ငါပြောချင်တာက ၀ င်းဒိုး ၈ ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းတွေအတွက်လုပ်တယ်။ ဒါကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် Windows ဖုန်းတွေနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကဆင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်၊ အဲဒါ pc's တွေမှာကယ်တင်လိမ့်မယ်။ ၀ င်းဒိုး ၇ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကိုသတိထားပါ။ Gnu / linux ကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်းတိုးရန်အဆိုပြုချက်ကောင်းများရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်ပေးထားသည်။ ၀ င်းဒိုး Vista လူတိုင်းကိုစိတ်ပျက်စေသောအချိန်နှင့်မတူသင့်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ) ။
ဘယ်လောက်လှတဲ့စာလုံးပေါင်း။ shit ရေးတတ်ဖို့သင်ယူပြီးရင်မင်းအဲဒီလို shit မယုံတာဘာလို့မှတ်ချက်ပေးတာလဲ
အခုတော့ Windows 8 ကိုဖြန့်ချိလိုက်ပြီဆိုပါက Ad-hoc networks တီထွင်ခြင်းကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိလိုက်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတက်ဘလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ပါ။
ငါခဏစောင့်ကြည့်နေပြီး Windows 8 ရဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဟာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့် OS တစ်ခုရှိခြင်းသည် gala date အတွက်မည်သည့်အဝတ်အစားမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအထောက်အကူပြုမည့်ကိရိယာများထက်ကွန်ပျူတာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကဲ့သို့ဖြစ်သည်
ငါဘက်မှရပ်တည်မယ်ဆိုရင်ငါ GNU / Linux အတွက်ပါ။ ပုံရသည် GNU ဖန်တီးရန်မူလရည်မှန်းချက်ပျောက်ဆုံးသွားသော်လည်း FSF သည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်၎င်း၏ကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်ကိုစွန့်ခွာကာစားသုံးသူများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်အတွက်ရုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှအာရုံစိုက်မှုကိုအပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာနှင့်တေးဂီတနှစ်သက်သူအားပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကိုကြည့်ကြည့် Apple ဟာနှစ်အတော်ကြာကတည်းကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကိုလျစ်လျူရှုထားသည့်မြေပြင်အနေအထား - သာမာန်အသုံးပြုသူ။ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုကြောင့်စိတ်ပျက်စရာမျက်နှာများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကွန်ပျူတာအားလုံး touch screen များအသုံးပြုသည်ဟု Microsoft ကထင်မြင်သည့်အချိန်တွင်။
အဘယျသို့ GNU / Linux ကိုစရိုက်ကဘာလဲ? ဘယ်ရှုထောင့်ကနေလဲ? ဂရပ်ဖစ်လား လုံခြုံရေးလား အသုံးဝင်မှုရှိသလား? မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်အက်ပဲလ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ပြောင်းလဲ၍ သုံးစွဲသူအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်သူတို့၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ GNU / Linux ကဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်မူလတန်းစနစ်ကိုမည်သို့တုပနေသနည်း
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖ်ဝဲမရှိပေမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူတွေကိုငါမကြာသေးမီကငါသိခဲ့ရတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ငွေပမာဏနှင့်တိုင်းတာသည်မဟုတ်ပါ၊ ထုတ်ကုန်၏အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုဖြင့်တိုင်းတာသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအသွင်အပြင်ကြောင့်ပဲသတို့သားမိန်းမသည်အခြားတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်လူသားများနှင့်ဆင်တူသည် - အတွင်းပိုင်းသည်အရေးကြီးသည်။
အပြင်ပန်းအားဖြင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင်၏ ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ပခုံးကိုမစီးဘဲရှေ့သို့မတက်နိုင်ပါ။ software မူပိုင်ခွင့်များမတည်ရှိသင့်ပါ။ သင်ရှိပြီးသားအရာများကိုပင်ဖန်တီးခွင့်မပြုခဲ့ပါကသင်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအရာတစ်ခုကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ အကြံဥာဏ်များသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အမှန်ပင်သက်ဆိုင်သလား။ ပရိသတ်အတွက်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုပြသရန်သင်မျှော်လင့်။ မရပါ။
Kevin Perez အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့မတည်ရှိသင့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ယောက်ဆီကနေသင်ယူလိုက်တဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုသင်တီထွင်မထားဘူး၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအက်ပဲလ်လိုမတီထွင်ခဲ့သူကိုဂုဏ်တင်သင့်တယ်လို့အနည်းဆုံးအသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်၊ စမတ်ဖုန်းကို Apple မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်မတူပါ။ စမတ်ဖုန်းကိုရှိပြီးသား၊ တိုးတက်အောင်လုပ်သည်၊ တီထွင်သူများကိုချီးကျူးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ Wintendo နှင့် ပတ်သက်၍ မူပိုင်ခွင့်မပေးလျှင်သူတို့အတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့ 2003 တီထွင်မှု Office ကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့တီထွင်သည်ဟုပြောလိမ့်မယ်
Primitive ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ CERN collider က linux ကိုသူ့ရဲ့ system တွေပေါ်မှာအသုံးပြုတယ်ဆိုရင် Windows or Apple ကိုအသုံးမပြုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ OS မှာကြော်ငြာဖို့စီးပွားရေးစွမ်းအားမရှိဘူး၊ Windows နှင့် Apple တို့ထက်ပိုမိုလုံခြုံသောစနစ်များကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ရှိသည်။
အဲဒါဟာ ... ဟောင်းနွမ်းနေပြီဆိုတော့ Windows မပါဘဲလုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းပေါင်းနှစ်သောင်းရှိပြီ။
ပန်းသီး၊ မိုက်ခရိုဆော့သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်မှမည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးမပြုခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်သည်စိုးမိုးမှုနှင့်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုမထောက်ခံလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်
PS: ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်ကအငြင်းပွားမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသင့်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။
Juan FELIPE ROSENDO ဟုသူကပြောသည်
ဤသည်မှာသင်၏ဘလော့နှင့်သင်၏မှတ်ချက်များသည်စင်ကြယ်သောအမှန်တရားနှင့်မှန်ကန်သောအမှန်တရားထက်မပိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် LINUX နှင့် MAC OS ၏ FERREO အသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အတွက်ကြောင့် WINDOWS ကိုမည်သည့်အခါမှအသုံးမပြုပါ။ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောအချက်များရှိသည့်ဤစာတမ်း၌သာမန်လူများဒဏ်ကြေးငွေသာပေးသောကျောင်းအင်ဂျင်နီယာများတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်လူအများရှိနေသေးသည် .. နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ..
Juan FELIPE ROSENDO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ငါထင်တာသိသာထင်ရှားလာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ win8 / 8.1 interface က applications တွေကို gnome3or unity မှာဖြန့်ကျက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်လို့မထင်ဘူးလား။
ဟေ့၊ Window 8 ၏ "ကူးယူအသစ်" နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအခြား windows7အတွက်တစ်ခုခုရှိလျှင်သူသိသည့်နေရာကိုမည်သူသိသနည်း။
VLC 2.0 တွင် RC ရှိ (iOS, Android, Mac, Linux & Windows)
ပါ ၀ င်ပြီး Debian Wheezy အသစ်ကိုဖန်တီးပါ